Indawo Yokuphumula Evulekile Ebukekayo - I-Airbnb
Indawo Yokuphumula Evulekile Ebukekayo
Ikamelo elihle, elivulekile, elihlanzekile, eligcwele ukukhanya ekhaya elise-Wolfeboro, e-NH. I-Jewel of Lake Winnipesaukee kanye ne-Oldest Summer Resort Town e-America. Ukupaka, indawo yokungena eyenzelwe izivakashi kuphela, ikamelo lokuhlala, ikamelo elikhulu, ikhabethe elikhulu nendawo yokugeza. Kutholakala emakhilomitheni angu-1 ukusuka enkabeni yedolobha lase-Wolfeboro ne-Brewster Academy bese kuba amamayela angu-1/4 ukuya e-Carry Beach. Eduze namamayela emizila yokuqwala izintaba nemizila yokushushuluza eqhweni ye-X-country, i-Gunreon Mountain, imibukiso yezandla, ukuthenga, izindawo zokudlela nokunye okuningi.
I-suite inendawo evulekile, ihlanzekile futhi inakho konke okudingekayo ukuze uhlale ngokunethezeka esifundeni esihle sechibi lase-New Hampshire. Isendaweni enokuthula enokufinyelela okulula kuyo yonke indawo.
4.98 · 185 okushiwo abanye
Indawo ka-Jack & Elaine ise- Wolfeboro,
Indawo yangakithi igcwele izihlahla futhi ithule. Sitholakala eduze nenkaba yedolobha enezitolo nezindawo zokudlela. Ngaphansi kwamamayela angu-1/2 ukusuka endlini yi-Sewall Woods enemizila yokuhamba engamakhilomitha angu-, nemizila ehlotshisiwe engu- x-Country ebusika. Isitimela sase-Carn Valley siqala edolobheni futhi sihamba amamayela angu-12 sixhuma e-Wakefield, e-NH. Ibhishi eliseduze kakhulu yi-Carry Beach, e-Lake Winnipesaukee, futhi lingaphansi kwamamayela angu-1/4 ukusuka endlini.
Noma nini lapho kungenzeka, sizoba khona ukukubingelela lapho ufika. Sitholakala ngomyalezo noma ngocingo kukho konke ukuhlala kwakho.